Sida loo furo faylasha CBR - VidaBytes | LifeBytes
Faylasha dhijitaalka ah ee aan ka heli karno aaladaha internetka ee kala duwan waxaa lagu raaxaysan karaa aaladaha kala duwan ee PDF, Word, JPG ama kordhinta kale ee laga yaabo inay tahay markii ugu horeysay ee aad aragto oo lagu furi karo codsiyada qaarkood. Maanta waxaan ka hadli doonaa sida loo furo faylasha CBRSida ay u badan tahay in qaar badan oo idinka mid ah horeba u ogaateen, waa faylal ay ku jiraan sawirro kala duwan oo la daawado iyadoo la isticmaalayo codsiyo gaar ah.
Nooca faylka ah wuxuu inta badan la xidhiidha majaajilada adduunka., inkastoo laga heli karo noocyo kale oo faylal ah. Haddii aad tahay qof jecel majaajilada, hubaal waxaad rabtay inaad ku raaxaysato in ka badan hal jeer, laakiin ma aadan garanayn sida loo furo faylka CBR, tani waxay dhammaanaysaa mahadsanid tabaha aan ku siin doono daabacaadan.
1 Waa maxay faylasha CBR?
2 Barnaamijyada lagu furayo faylasha CBR gudaha Windows
2.1 Muuqaalka CDisplay
3 Barnaamijyada lagu furayo faylasha CBR ee Mac
3.1 Maqaalka Majaajillada Maqaalka
3.2 Akhristaha DrawStrip
4 Apps si loo furo faylasha CBR Android ama IOS
4.1 Shaashada qosolka
Waa maxay faylasha CBR?
Faylashan CBR waxay la mid yihiin kuwa kale oo badan oo aan la kulmi doono in ka badan hal mar, ZIP ama RAR, dukumeenti taxane ah oo la cufan. Mid ka mid ah farqiga ugu weyn ee faylasha CBR waa kuwan waxaa ku jira sheekooyin ay ka buuxaan sawirro taxane ah. Sawirradan waxaa loo dejiyey hab gaar ah, si marka ay ku raaxaystaan ​​loogu sameeyo si habsami leh.
Faylasha CBR, sida caadiga ah sidaan ku sheegnay bilawga daabacaadda, ayaa loo isticmaalaa in lagu kaydiyo majaajilada si dhijitaal ah. Waa qaab, kaas oo aan soo bandhigin wax guuldarro ah marka la kala saaro oo leh codsiyo gaar ah sida WinZip.
Abuuraha qaabka faylkan waa David Ayton, kaas oo 90-meeyadii soo saaray software kaas oo lagu daawado majaajilada dhib la'aan, software-kani wuxuu ahaa CDisplay.. Daah-furka barnaamijkan cusub waxa uu ahaa kacaan weyn oo u horseeday caalamka daawashada muuqaallada ee jira ilaa maanta.
Waad ku mahadsan tahay CDisplay, sawirada isku xigxiga ayaa lagu arkay shaashadda oo dhan si aad u fiiqan.z, tayada iyo tafaasiisha, had iyo jeer ixtiraamaya nidaamka la calaamadeeyay marka la akhrinayo tacaburrada laga sheegay boggaga dhexdooda.
Xarfaha hore ee "CB", oo ah nooca faylka noocaan ah, waxay ka yimaadeen Buuga Majaajilada ah, oo ah qaab si gaar ah loo sameeyay si loo furo iyadoo la adeegsanayo software-ka CDisplay. Haddii waqtiga soo dejinta faylashan waxaad eegtaa xarafka ugu dambeeya, tani waxay tilmaamaysaa nooca cadaadis ee la isticmaalay, taas oo ah, haddii loo sii marayo faylka RAR, wuxuu soo baxayaa .cbr, dhinaca kale haddii uu yahay ZIP, faylka wuxuu soo baxayaa magaca .cbz.
Haddii aad diyaar u tahay inaad sii waddo ama aad bilowdo inaad ku raaxaysato sheekooyinka majaajilada aad jeceshahay, Waxaan kuu soo qaadanaynaa xulashada qaar ka mid ah barnaamijyada ugu fiican ee la soo dejisan karo oo la furo faylka noocaan ah si fudud oo khaladaad ah, qaybta xigta. Ma arki doonno oo keliya barnaamijyada lagu tilmaamay isticmaaleyaasha Windows-ka, laakiin sidoo kale kuwa adeegsada Mac-ga waxaa sii dheer codsiyada mobilada ee labada Android iyo IOS.
Barnaamijyada lagu furayo faylasha CBR gudaha Windows
Haddii aad tahay isticmaale Windows oo aad rabto inaad ogaato oo aad barato sida aad u furi karto faylasha CBR, waxaad heli kartaa mid ka mid ah barnaamijyada soo socda ee aan sheegi doonno.
Ma aanan xusi karin barnaamijkan liiskayaga waxaana uga mahadcelineynaa abuurihiisa fikradda ah fulinta qaabkan iyo wax kasta oo ku xeeran. Muuqalka, Waa barnaamij aad u fudud oo loogu talagalay kombuyuutarrada, laakiin isla markaana aad u hufan Iyadoo aan la iloobin in ay gebi ahaanba xor tahay.
Waa barnaamij si gaar ah looga shaqeeyay kana mid ah kuwa ugu cadcad dadka jecel majaajilada. Waxay bixisaa waayo-aragnimo akhris oo cajiib ah, awood u leh inay akhrido qaabab kala duwan sida PDF, CBR, CBZ, iyo kuwo kale. Majaajilada ayaa lagu shubaa ilbiriqsiyo gudahood iyaga oo aan lumin tayada lana ixtiraamin dhammaan noocyada faahfaahinta.
Mid kale oo ka mid ah barnaamijyada ugu fiican, marka la eego akhrinta faylasha CBR loo tilmaamay in lagu akhriyo majaajilada kumbuyuutarka. Software-kan, kuma raaxaysan kartid oo kaliya sheekooyinka lagu sheego boggaga majaajilada, laakiin sidoo kale waxaad wax ka beddeli kartaa waxyaabaha dhijitaalka ah.
Qodob wanaagsan oo loogu talagalay dadka ka masayray wadaaga faylalkooda, waa taas Gonvisor wuxuu ku siinayaa suurtogalnimada inaad ku ilaaliso dukumeentigaaga akhriska adigoo isticmaalaya erayga sirta ah. Ikhtiyaar siinaya qiimaha barnaamijkan.
Barnaamijyada lagu furayo faylasha CBR ee Mac
Halkaa marka ay marayso, waxaan arki doonaa barnaamijyo kala duwan oo ay isticmaalayaasha Mac awood u yeelan doonaan inay furaan faylasha CBR iyada oo aan wax dhibaato ah la kulmin.
Maqaalka Majaajillada Maqaalka
Barnaamijkan ugu horreeya ee aan keeno liiskan, ma awoodi doontid inaad furto faylasha CBR, laakiin sidoo kale CBZ iyo faylasha PDF. Iyada oo la adeegsanayo is-dhexgal aad u fudud, waxaad awood u yeelan doontaa inaad si dhakhso leh u dhex marato dhammaan waxyaabaha ay ku siiso. Tan waa la fududeeyay iyadoo ay ugu wacan tahay sawirka thumbnails ee laguu soo bandhigay.
Mid ka mid ah soo jiidashada ugu weyn waa taas waxay taageertaa akhrinta iyo daawashada laba bog. Xulashadan soo bandhigida, ujeedadu waa in lagu daydo akhrinta majaajilada ah, sida haddii aad farahaaga uga rogi lahayd boggaga midig una leexinayso bidix. Waxaad barnaamijkan ku haysan kartaa qalabkaaga App Store qiimo dhan 5.49 euro.
Sida dhowr ka mid ah barnaamijyada aan soo sheegnay, DrawnStrip Reader wuxuu kaloo la jaan qaadayaa noocyada kale ee qaababka marka lagu daro CBR, sida; CBZ, CB7. CBT, ZIP, RAR, iyo kuwo kale. Software-kan aan ka hadlayno waxaa loo habeeyay shaashadaha retina, sidoo kale wuxuu ku siinayaa suurtogalnimada inaad u beddesho faylashaas qaabab kale.
Waxa kale oo ay kuu ogolaanaysaa inaad sawirada ka soo saarto faylasha aad jeceshahay, oo aad awooddo inaad la wadaagto. Qodob aad u wanaagsan ayaa ah in ay ku siinayso iftiin iyo hagaajin kala duwan si aad ula qabsato waxa aad doorbidayso. Waxaad ka heli kartaa DrawnStrip Reader adiga oo ka iibsanaya dukaanka Apple qiimo dhan 4.49 euro.
Apps si loo furo faylasha CBR Android ama IOS
Qaybtan ugu dambeysa, waxaan ku arki doonaa barnaamijyo taxane ah oo tilmaamaya inay ku raaxaystaan ​​nooca faylalka mobiladayada iyada oo aan wax nooc ah la soo dejin ama muujin khalad.
Mid ka mid ah codsiyada ugu fiican ee aad awoodi doonto inaad ka hesho suuqa qalabka Android, kaas oo aad ku raaxaysan karto labada faylasha CBR iyo CBZ. Ma aha oo kaliya inay ku sii jirto halkaas, laakiin sidoo kale waxay la jaan qaadayaan noocyada kale ee qaababka sida JPG, GIF, PNG ama BMP.
Waa codsi gabi ahaanba bilaash ah, laakiin leh nuxur xayaysiis, kaas oo aad ka saari karto haddii aad iibsato abka xidhmaysan. Ogsoonow ma aha oo kaliya inay kuu ogolaato inaad si toos ah u jajabiso faylasha CBR iyo CBZ, laakiin sidoo kale waxaad si madaxbanaan u geli kartaa sawirada.
Isticmaalayaasha IOS, waxaan kuu keenaynaa tan Codsi aad u fudud oo ujeeddadiisu tahay inuu kuu oggolaado inaad akhrido faylasha CBR iyo CBZ. Iyada, waxaad ku heli kartaa faylasha lagu kaydiyay goobo dhijitaal ah oo kala duwan sida Dropbox, Drive, OneDrive, iwm.
Soo dejinta faylalka la doortay ee degel kasta waxaa si toos ah loogu sameeyaa qalabkaaga gacanta. Sida kiiskii hore, waa codsi gebi ahaanba bilaash ah oo laga heli karo dukaanka Apple.
Ilaa hadda, liiskayaga oo leh soo jeedinno kala duwan oo loogu talagalay barnaamijyada iyo codsiyada la heli karo si aad naftaada u dhex geli karto sheekooyinka xiisaha leh ee adduunka majaajillada. Kaliya waa inaad ogaataa, barnaamijka ama codsiga lagu tilmaamayo aaladda aad rabto inaad ka bilowdo akhrinta, soo dejinta, rakibida iyo bilaabista inaad ku raaxaysato.
Wadada buuxda ee maqaalka: LifeBytes » Aplicaciones » Sida loo furo feylasha CBR